Ehe, isu tinoda kuti maofficial ese epamutemo ave neaneti risingaperi rekuraira. Kana iwe uri kutarisa kutengesa asi mune zvidiki zvakanyanya, tinokurudzira kuti uongorore webhusaiti yedu
Hongu, tinogona kupa zvinyorwa zvakawanda kusanganisira Zvitupa Zvekuongorora / Kubvumirana; Inishuwarenzi; Chibviro, uye mamwe magwaro ekuendesa kunze kwave kudikanwa.
30% dhipatimendi pamberi, 70% chiyero kupesana nekopi yeB / L.
Isu tinopa waranti yemidziyo yedu uye basa rekugadzira. Kuzvipira kwedu ndeye kugutsikana kwako nezvigadzirwa zvedu. Mune waranti kana kuti kwete, ndiyo tsika yekambani yedu kugadzirisa uye kugadzirisa zvese zvevatengi kugutsikana
Ehe, isu tinogara tichishandisa yakakwira mhando yekutengesa kunze. Isu tinoshandisa zvakare hunyanzvi hwekutakura mhete kurongedza zvinhu zvine njodzi uye yakakosheswa chengetedzo inotakura vatyairi veidziya inotonhora zvinhu. Nyanzvi kurongedza uye zvisiri-zvakajairika zvongedzo zvinodikanwa zvinogona kuunza imwe mubhadharo.
Mari yekutumira inoenderana nenzira yaunosarudza kuwana zvinhu. Express kazhinji ndiyo inokurumidza kupfuura asi zvakare inodhura nzira. Negungwa yegungwa ndiyo mhinduro yakanyanya kuwanda. Izvo chaizvo zviyero zvemitero isu tinongogona kukupa iwe kana isu tichiziva ruzivo rwehuwandu, uremu uye nzira. Ndokumbira kuti utibate kuitira rumwe ruzivo.